IHuawei Mate 20 ifumaneka kwiOrange kunye neHuawei Bukela iGT njengesipho | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UEder Ferreño | | Huawei, Abasebenza ngefowuni
I-Huawei Mate 20 sele isemthethweni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina sele sibonisiwe kumsitho obuseLondon obangele umdla wedama lehlabathi. Ukuphehlelelwa kweemodeli ezimbini ezintsha zomenzi waseTshayina kulindeleke kule nyanga ye-Okthobha. Kwaye ngoku unokugcina ifowuni yakho ngeorenji. Umqhubi odumileyo usinika iindlela ezininzi zokufumana ezi modeli ziphakamileyo.
Ukongeza, bayayenza ngothusayo kwabo bagcina nayiphi na i-Huawei Mate 20 kude kube ngu-Okthobha 31. Njengoko Baza kufumana iHuawei Watch GT simahla. Iwotshi enexabiso ngee-euro ezingama-229, ke esi sisipho esikhulu esivela kwiorenji.
Abo banomdla kwisiphelo esitsha esiseHuawei banokubakho Thenga nayiphi na iimodeli zasimahla okanye ukubheja kwi Ixabiso elibalulekileyo leOrange. Kukho amaxabiso aliqela afumanekayo kwifowuni nganye, ke kulula ukuba ukhethe enye ehambelana noko sikufunayo ngokusekwe kusetyenziso kunye neemfuno zethu.
Unga bona kule khonkco Onke amaxabiso eorenji kunye neHuawei Mate 20. Unethuba lokukhetha elifanele wena, nokuba ungazithenga simahla okanye ngerhafu evela kumsebenzisi. Nokuba yeyiphi na indlela oyikhethayo, okoko nje uzithengayo kude kube ngu-Okthobha 31, uya kuba nakho thatha iHuwei Watch GT nefowuni yakho mahhala.
Ukuze ukwazi ukuthatha iwotshi njengesipho, Ngaphandle kokuthenga enye yezi Huawei Mate 20, Kuya kufuneka wenze ezinye izinto ezimbalwa. Kude kube nguNovemba 15 iwebhu ivuliwe www.neworleanshtecl.com apho kufuneka ufikelele khona. Kuya kufuneka ubhalise kule webhusayithi usebenzisa i-IMEI yomnxeba kunye ne-invoyisi yokuthenga, ukongeza ekunikezeleni ngolwazi malunga nokuhanjiswa kwezinto. Ngala manyathelo uza kufumana iHuawei yeWatch GT simahla.
Akuthandabuzeki lithuba elihle lokuthatha isiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina ngamaxabiso aphezulu. Ezi ziHuawei Mate 20 ziya kuba yenye yezona zinto ziphambili kwezi nyanga, kwaye ukubanakho ukuthatha i-smartwatch entsha yohlobo simahla kuhlala kunomdla. Khumbula, kufuneka ugcine okanye uthenge ifowuni kule nyanga, kude kube ngu-Okthobha 31. Ungaphoswa yile ntengiso!
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abasebenza ngefowuni » Gcina i-Huawei Mate 20 nge-Orenji kwaye ufumane iHuawei yeWatch GT simahla